URamaphosa kumele ayisukumele ngokushesha eyenkohlakalo - Omakadebona | News24
URamaphosa kumele ayisukumele ngokushesha eyenkohlakalo - Omakadebona
Johannesburg - Omakadebona be-African National Congress bahalalisele umengameli omusha we-ANC uCyril Ramaphosa base ephakamisa ukuthi kumele isukunyelwe ngokushesha indaba yenkohlakalo.
URamaphosa waqumba phansi lowo ayencintisana naye kulesi sikhundla uNkosazana Dlamini-Zuma waphuma phambili ekuholeni le nhlangano yomzabalazo eneminyaka engu-105 yasungulwa.
Labo makadebona bakhiphe isitatimende ngoLwesine bathi bafisela uRamaphosa okuhle kodwa kulokhu abakubuke njengohambo olunzima olubhekene nale nhlangano kanye nezwe.
OLUNYE UDABA: Asihlaleni kwi-ANC silungise 'umonakalo' - Ramaphosa
Bazwakalise ukuthi bayethemba ukuthi uRamaphosa uzofika nokusha ku-ANC nasesizweni.
"Njengomakadebona, siyakholelwa ekutheni kuningi okusamele kulungiswe. Sizoqhubeka nokunxenxa ukuthi isukunyelwe indaba yenkohlakalo esibukeka isikapakele kuzona zonke izingxenye zomnotho," kusho isitatimende.
Bathi labo abanenkohlakalo abanandawo kuhulumeni, i-ANC, ezimbonini zikahulumeni kanye nezizimele.
Kuzokhumbuleka ukuthi ngasekuqaleni kwale nyanga, iNkantolo eNkulu inikeze uRamaphosa izinyanga ezimbili ukuba aqoke umqondisi wezokushushiswa komphakathi omusha ngemuva kokuthola ukuthi uShaun Abrahams waqokwa ngokungemthetho.